Baahin: Axad, Jun 19, Weriye C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Garowe. R/wasaare Farmaajo oo is-casilay, kuna sababeeyey u tanaasul ummadeed; Kalfadhiga 26-aad ee baarlamaanka Puntland oo maanta furmay; Afhayeen C/rashiid M. Xirsi oo tafaasiil ka bixiyey ajandaha kalfadhiga; Xukuumada M/weyne Faroole oo lagu dhaliilay in ay ku fashilantay siyaasada arrimaha gudaha & amniga; Dooxajoog oo sheegta in uu madaxweyne ka yahay maamulka Raas-casayr oo aan waraysanay. – Radio Daljir
Baahin: Axad, Jun 19, Weriye C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Garowe. R/wasaare Farmaajo oo is-casilay, kuna sababeeyey u tanaasul ummadeed; Kalfadhiga 26-aad ee baarlamaanka Puntland oo maanta furmay; Afhayeen C/rashiid M. Xirsi oo tafaasiil ka bixiyey ajandaha kalfadhiga; Xukuumada M/weyne Faroole oo lagu dhaliilay in ay ku fashilantay siyaasada arrimaha gudaha & amniga; Dooxajoog oo sheegta in uu madaxweyne ka yahay maamulka Raas-casayr oo aan waraysanay.